Saddex qof oo lagu dilay deegaan ku yaalla duleedka Muqdisho – XOGMAAL.COM
Saddex qof oo lagu dilay deegaan ku yaalla duleedka Muqdisho
By Soomaaliya	 On Apr 15, 2019
Kooxo hubeysan ayaa xalay deegaanka Ceelasha Biyaha ee duleeedka magaalada Muqdisho ku dishay Saddex qof oo saarnaa gaari yar oo marayay Isgoyska Ceelasha Biyaha.
Sida wararku sheegayaan dableyda weerarka geysatay ayaa rasaas ooda uga qaaday gaariga ay dadka Shacabka ah saarnaayeen, iyagoo weerarka kadib goobta isaga cararay, ka hor inta aysan gaarin Ciidamada amaanka.
Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa Warbaahinta gudaha u sheegay in dadka la toogtay ay dhamaantoodba ahaayeen rag, iyadoo aan la garanin sababta rasmiga ah ee dilka ka dambeysa, balse Ceelasha Biyaha waxaa ka dhacayay dilal leh ujeeddooyin kala duwan.
Dadka deegaanka ayaa sheegay dadka la dilay inay ahaayeen kuwa degan xaafadda Jabadgeele oo ku taallo Ceelasha Biyaha, iyadoo Kooxda weerarka geysatayna ay ku baxsadeen gaari nooca raaxada ah oo ay wateen.
Deegaanka Ceelasha Biyaha ayaa waxaa muddooyinkii u dambeeyay ka jiray howlgallo amniga lagu sugayay oo ay wadeen Ciidamada ammaanka.
Hoggaamiye ku xigeenkii Daacishta Soomaaliya oo la dilay
Ilhan Cumar oo sheegtay in loogu hanjabay dil
War aan la fileyn ayay Maxkamadda Hargeysa ka soo saartay Xariga Wariye Coldoon
Akhriso Dilkii iyo kufsigii Caa’isha Rag loo haysto ayaa Garoowe loo gudbiyay
Dhacdo xanuun badan Hooyo Canug ay ku dhashay Isbitaal oo looga Xaday Muqdisho
Qof u hanjabay Ilhaan Cumar iyo xubno kale ayaa xabsiga dhigay
War aan la fileyn ayay Maxkamadda Hargeysa ka soo saartay …
Akhriso Dilkii iyo kufsigii Caa’isha Rag loo haysto ayaa …
Dhacdo xanuun badan Hooyo Canug ay ku dhashay Isbitaal oo looga…
Jubbaland Oo si adag ugu digtay Odayaasha Dhaqanka ee…
Maxaa ka jira in Boqorka Sacuudiga uu martiqaad u soo diray…